11 Zvino vanhu vakaita sevanhu vaiva nechimwe chinhu chakaipa chokunyunyuta pamusoro pacho Jehovha achizvinzwa.+ Jehovha paakazvinzwa, akabva atsamwa kwazvo, uye moto waJehovha wakapfuta pakati pavo, ukaparadza vamwe vaiva kumucheto kwomusasa.+ 2 Vanhu pavakatanga kuchema kuna Mosesi, iye akabva ateterera Jehovha,+ uye moto wacho wakadzima. 3 Nzvimbo iyoyo yakazotumidzwa kuti Tabhera,+ nokuti moto waJehovha wakanga wapfuta pakati pavo. 4 Zvino boka revamwe vanhu vakanga vakavhengana+ raiva pakati pavo rakava nenhomba youdyire,+ uye vanakomana vaIsraeri vakatangawo kuchemazve, vachiti: “Ndiani achatipa nyama kuti tidye?+ 5 Tinoyeuka hove dzataidya muIjipiti tisingatengi,+ magaka nemanwiwa nerikisi nehanyanisi negariki! 6 Asi zvino mweya yedu yaoma. Maziso edu haana chimwe chaachiri kuona kunze kwemana iyi.”+ 7 Sezvineiwo, mana+ yacho yakanga yakaita sembeu yekorianderi,+ uye yaitaridzika sedheriyumu.+ 8 Vanhu vaipararira voinhonga,+ voikuya pamakuyo kana kuti kuidzvura muduri, uye vaiibikira muhari dzokubikira+ kana kuti vaiigadzira kuti ive makeke eraundi, uye kunaka kwayo kwaiita sokunaka kwekeke rinotapira rakabikwa nemafuta.+ 9 Dova paraidonhera pamusoro pomusasa usiku, mana yacho yaidonherawo ipapo.+ 10 Zvino Mosesi akanzwa vanhu vachichema mumhuri dzavo, murume mumwe nomumwe ari pasuo retende rake. Jehovha akatsamwa kwazvo,+ uye zvakanga zvakaipa kuna Mosesi.+ 11 Mosesi akabva ati kuna Jehovha: “Makaitirei zvakaipa kumushandi wenyu, uye nei musina kundinzwira nyasha, zvamakaisa mutoro wevanhu ava vose pandiri?+ 12 Ndini ndakabata pamuviri pevanhu vose ava here? Ndini ndakavabereka here, kuti muti kwandiri, ‘Vatakure pachipfuva chako,+ sokutakura kunoita mureri wechirume mwana anoyamwa,’+ uende navo kunyika yamakapikira madzitateguru avo?+ 13 Nyama yokupa vanhu vose ava ndinoiwana kupi? Nokuti vanoramba vachindichemera, vachiti, ‘Tipe nyama tidye!’ 14 Handikwanisi kutakura vanhu ava vose ndoga, nokuti vanondiremera kwazvo.+ 15 Naizvozvo kana muri kundiitira saizvozvo, ndapota ndiurayei henyu,+ kana mandinzwira nyasha, musaita kuti ndione dambudziko rangu.” 16 Jehovha akatiwo kuna Mosesi: “Ndiunganidzire varume makumi manomwe pavarume vakuru vaIsraeri,+ vaunoziva kuti varume vakuru vevanhu nevatungamiriri vavo,+ uende navo kutende rokusanganira, uye ngavamire ipapo newe. 17 Ndichaburuka,+ ndotaura newe ipapo;+ ndichatora mumwe mudzimu+ uri pauri ndouisa pavari, uye vachakubatsira pakutakura mutoro wevanhu vacho kuti urege kuutakura uri woga.+ 18 Zvino iwe uti kuvanhu, ‘Zvitsvenesei nokuda kwamangwana,+ nokuti muchadya nyama, zvamakachema Jehovha achinzwa,+ muchiti: “Ndiani achatipa nyama kuti tidye, nokuti zvakanga zvakatinakira muIjipiti?”+ Jehovha achakupai nyama, uye muchadya.+ 19 Hamungadyi zuva rimwe kana mazuva maviri kana mazuva mashanu kana mazuva gumi kana mazuva makumi maviri, 20 asi kwomwedzi wose, kusvikira yava kubuda nomumhino dzenyu uye yava kukusemesai,+ nokuti makaramba Jehovha, ari pakati penyu, uye makachema pamberi pake, muchiti: “Takabvirei kuIjipiti?”’”+ 21 Mosesi akabva ati: “Vanhu vandiri pakati pavo varume zviuru mazana matanhatu+ vanofamba netsoka, asi imi mati, ‘Ndichavapa nyama, uye vachadya kwomwedzi wose’! 22 Vachaurayirwa makwai nemombe, kuti vakwane here?+ Kana kuti vachabatirwa hove dzose dzomugungwa, kuti vakwane here?” 23 Jehovha akati kuna Mosesi: “Ruoko rwaJehovha rwakanyanya kupfupika here?+ Zvino uchaona kana zvandinotaura zvichaitika kwauri kana kuti kwete.”+ 24 Pashure paizvozvo Mosesi akabuda, akaudza vanhu mashoko aJehovha. Akaunganidza varume makumi manomwe kubva pavarume vakuru vevanhu, akaita kuti vamire vakapoteredza tende.+ 25 Jehovha akabva aburuka ari mugore,+ akataura naye,+ akabvisa mumwe mudzimu+ wakanga uri paari, akauisa pane mumwe nomumwe wevarume vakuru makumi manomwe. Mudzimu wacho pawakangogara pavari, ivo vakabva vaita sevaprofita; asi havana kuzozviitazve.+ 26 Zvino paiva nevarume vaviri vakasara vari mumusasa. Mumwe ainzi Eridhadhi, uye mumwe wacho ainzi Medhadhi. Mudzimu wacho wakagara pavari, zvavaiva vamwe vevaya vakanyorwa, asi vakanga vasina kubuda kuti vaende kutende. Naizvozvo vakaita sevaprofita vari mumusasa. 27 Rimwe jaya rakamhanya, rikaudza Mosesi richiti: “Eridhadhi naMedhadhi vari kuita sevaprofita mumusasa!” 28 Joshua mwanakomana waNuni, mushumiri+ waMosesi kubvira paujaya hwake, akabva apindura akati: “Ishe wangu Mosesi, vadzivisei!”+ 29 Asi Mosesi akati kwaari: “Uri kunzwa godo nokuda kwangu here? Aiwa, ndaizoda kuti dai vanhu vose vaJehovha vaiva vaprofita, nokuti Jehovha aizoisa mudzimu wake pavari!”+ 30 Gare gare Mosesi akaenda kumusasa, iye nevarume vakuru vaIsraeri. 31 Zvino mhepo+ yakabva kuna Jehovha, ikatanga kuuyisa zvihuta kubva kugungwa+ ichizviwisira pamusasa, zvikavapo munzvimbo ingaita rwendo rwezuva rimwe chete kuenda uku uye rwendo rwezuva rimwe chete kuenda uko, kupoteredza musasa wose, uye zvikaita anenge makubhiti maviri pamusoro penyika. 32 Vanhu vakabva vasimuka zuva iroro rose nousiku hwose nezuva rakatevera racho rose vakaramba vachiunganidza zvihuta. Akaunganidza zvishoma, akaunganidza homeri gumi,+ uye vakaramba vachizviyanika munzvimbo yakakura kwazvo kupoteredza musasa wose. 33 Nyama yakanga ichiri pakati pemazino avo,+ isati yatsengwa, Jehovha paakatsamwira+ vanhu vacho kwazvo, uye Jehovha akauraya vanhu vazhinji kwazvo.+ 34 Nzvimbo iyoyo yakazonzi Kibroti-hataavha,+ nokuti ipapo vakaviga vanhu vakaratidza nhomba youdyire.+ 35 Vanhu vakatama paKibroti-hataavha vakaenda kuHazeroti, vakaramba vari paHazeroti.+